Madaxweyne xasan sheikh oo ciidamada dowladda ee galguduud ugu baaqay dhabar adayg (Maqal) – Radio Daljir
Madaxweyne xasan sheikh oo ciidamada dowladda ee galguduud ugu baaqay dhabar adayg (Maqal)
Oktoobar 20, 2013 5:09 b 0
Muqdisho, October 20, 2013 – Madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan sheikh maxamuud ayaa la hadlay ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya kuna sugan xerada 21 aad ee degmada Dhuusmareeb.
Madaxweynaha dalka ayaa hadalo u badan amaan iyo dhiiri-gelin ku yiri ciiidamada mar uu khadka telfoonka kaga qayb-galay munaasabad ka dhacday xerada ciidamada, madaxweynuhu wuxuu ka dalbaday ciidanka in ay u dhabar adeegaan difaaca dalka.
?Tamarta dowladda waa yartahay, balse waxaa qorshaha ku jira ilaalinta xuquuqdiina oo noqon doonta mid joogta ah.? Ayuu yiri madaxweyne xasan sheikh oo la hadlayey ciidaanka dalka.
Ciidamada dowladda ee degmada dhuusmareeb ayaa u badan kuwa tababar qaadanaya wakhtigan, balse la filayo in ay dhowaan kaalin wayn ka qaataan qorshaha dowladda ee ku aadan gobolka Galguduud, sida ay Soomaaliya sheegtay.
DHEGEYSO: Madaxweyne xasan sheikh maxamuud oo ka la hadlaya ciidamada
Maamulka gobolka Sanaag oo Soomaaliland uga digay faragelin ay ka wadan gobolkaas (Dhegeyso)
Ciidamada Soomaaliya kuwa Itoobiya oo kaabiga ku ah degmada Waajid ee Gobolka Bakool